नेपाल – Page 59 – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
प्रधानमन्त्री देउवालाई मोदीको बधाई
प्रकाशित मिति: ६ पुष २०७४, बिहीबार
काठमान्डौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेकामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज बधाई दिएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले आज प्रधानमन्त्री देउवालाई टेलिफोन गरी ऐतिहासिक..
डा. उपेन्द्र देवकोटालाई क्यान्सर, गम्भीर अवस्थामा लन्डनमा उपचार हुंदै
प्रकाशित मिति: ५ पुष २०७४, बुधबार
काठमान्डौं । नेपालका सुविख्यात चिकित्सक डा. उपेन्द्र देवकोटा गम्भीर बिरामी पर्नुभएको बुझिएको छ । विशेषगरी ‘न्युरो’सम्बन्धी उपचारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्याति कमाउनुभएका डा. देवकोटा दुर्लभ प्रकारको क्यान्सरबाट पीडित हुनुभएको उहाँनिकट सुत्रले..
ईतिहासमा दुई तिहाई र बहुमतको रेकर्ड कांग्रेससँग मात्रै
काठमान्डौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणामले केन्द्रीय संसद् प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नपुग्ने देखाएको छ। नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा..
एमालेसंग पार्टी एकीकरण भए माओवादीमा विद्रोह
प्रकाशित मिति: ४ पुष २०७४, मंगलवार
काठमान्डौं । प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी एकतासम्म गर्न सक्ने भन्दै बाम तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएको माओवादी केन्द्रका लागि त्यही तालमेल र एकताको बिषय घाडो हुने भएको छ । देशैभरी आफ्नो पक्षमा निकै कम मत खस्ने आँकलन गरेका प्रचण्डले..
कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई सफाई
काठमाडौं । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी नभएको ठहर गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा चौधरीलाई टीकापुर घटनाको पीडितका रुपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीले चौधरीलाई..
प्रकाशित मिति: ३ पुष २०७४, सोमबार
काठमाडौं ३ मंसिर । काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर ४।२ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको भुकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । केहि स्थानमा भूकम्पको कडा धक्का महसुस गरिएको छ। २०७२ सालको बिनाशकारी भूकम्पपछि चार रेक्टर..
प्लास्टिकको झोलामा नवजात शिशुको शव
नुवाकोट, २ पुस । विदुर नगरपालिका–८ बगुवा खोला किनारमा प्लास्टिकको झोलामा नवजात शिशु (बालक) को शव भेट्टिएको छ । आज अपराह्न खोला किनारमा प्लास्टिकको झोलामा पोको पारेर फालिएको अवस्थामा शिशुको शव भेट्टिएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीयबासीले खोला किनारमा..
अपहरण मुद्दाका फरार अभियुक्त भेडिहर पक्राउ
पर्सा, २ पुस । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका–३२, चोर्नी निवासी सूर्यप्रकाश गुप्तालाई अपहरण गरेको अभियोगमा विगत एक वर्षदेखि प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका पर्साको..
सिटौलामाथि अपजसको भारी
झापा - झापाबाट उदाएर कांग्रेसभित्र प्रभावशाली छवि र स्थान बनाएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका लागि यसपटकको निर्वाचन बिर्सनलायक रह्यो। उनी आफै त हारे नै, गृहजिल्लाका अन्य उम्मेदवारको हारको अपजस पनि उनकै थाप्लोमा आइलागेको छ। त्यसैले अन्य उम्मेदवार..
सरकारले तोक्यो ७ प्रदेश प्रमुख
काठमाण्डौं । सरकारले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको छ । आज बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले निजामती प्रसासनका वरिष्ठ अधिकारहिरुलार्य प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्री परिषद् बैठकले सिफरिस गरेकाहरुमा प्रदेश नम्बर १ मा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय..